Mica Powder, Mica Flake, Chips Midabka - Lingshou
Mica flakes waxaa laga soo qaatay koox xaashiyo macdanta leh oo loo yaqaan 'silicate mineral', oo loo yaqaan mica, oo ay ka mid yihiin muruqyada, phlogopite, biotite iyo kuwa kale. Iyada oo loo marayo geedi socod soo saar farsamo oo sareeya, macdanta mica-ga ayaa loo kala qaybiyaa qaybo go'yaal ka kooban, oo loo kala qaybiyey kooxo midabyo dabiici ah isla markaana loo kala jabiyey cabbirno cabbirkoodu jaan go'an yahay. Qulqulka noocan ah wuxuu bixiyaa dabeel dabiici ah oo dabiici ah oo aan lagu gaari karin macdano kale oo injineernimo. Iyagu waa shuraakada ugu fiican ee soosaarka lacquer iyo rinjiga dhagaxa sidoo kale waa shey adag oo is qurxin leh oo loogu talagay dusha sare iyo dharka gudaha.
Faahfaahinta ugu weyn ee Mica Powder ee shirkadeena: 20 mesh, 40 mesh, 60 mesh, 80 mesh, 100 mesh, 325 mesh, 400 mesh, 500 mesh, 600 mesh, 800 mesh, 1000 mesh, 1250 mesh iyo 2500 mesh. Sidoo kale waa la dejin karaa. Budada Mica waa nooc ka mid ah macdanta birta-macdanta, oo ay ku jiraan noocyo kala duwan oo ah maaddooyin leh ku dhowaad 49% SiO2 iyo 30% Al2O3. Mica waxay leedahay awood ballaarin iyo adkeyn xoog leh. Waa nooc ka mid ah waxyaabaha lagu daro waxyaabaha aasaasiga ah ee guryaha korantada, iska caabbinta heerkulka sare, aashitada iyo iska caabbinta alkali, iska caabbinta daxalka iyo xajiin adag, iwm. Waxaa si balaadhan loogu dabaqaa aaladaha korantada, bir alwaaxa, caag, balaastig, warqad, balaastig, dabool, rinjiga, dhoobada, qurxinta iyo alaabada dhismaha iyo warshadaha kale. Marka la horumariyo tikniyoolajiyada, codsiyo cusub ayaa la baari doonaa.
Vermiculite waa nooc macdanta laga sameeyay oo ay ka kooban tahay Mg oo ay ka sii dareysan tahay tan labaad silikates aluminium. Waxaa badanaa lagu sameeyaa cimilada ama beddelaadda hawo-biyoodka biotite ama isku-daboolida. Waxaa loo qaybiyey heerar, vermiculite waxaa loo kala qaybin karaa 'vermiculite' aan qarsooneyn iyo ballaadhinta vermiculite. Waxaa loo qaybiyey midab, waxaa loo kala qaybin karaa dahab iyo qalin (fool maroodi). Vermiculite waxay leedahay sifooyin aad u fiican sida uumiga kuleylka, iska caabbinta qabowga, bakteeriyada ka hortagga, dabka ka hortagga, nuugista biyaha iyo nuugista codka, iwm. Marka la dubo 0.5 ~ 1.0 daqiiqadood ka yar 800 ~ 1000 ℃, cabirkiisa ayaa si dhakhso leh loogu kordhin karaa 8 ilaa 15 jeer, ilaa 30 jeer, oo midabku isu beddelay dahab ama qalin, soosaarid jilicsan oo nuxur leh oo la ballaariyey oo aan anti-acid iyo liidata ku ah waxqabadka korantada.
Flakes midab, sidoo kale waxaa caadi ahaan loogu yeeraa sida dillaacyada, jibiska, jajabinta ama xabbado qolofta iwm. Habka waxsoosaarka farsamada ee aadka u sareeya, waxay sameysaa nooc ka mid ah noocyo kala duwan oo hexagonal ah oo ah shey u eg kaas oo loo sameeyo badeecado lagu qurxiyey oo loo isticmaalo balaastigga iyo alaabada caagga ah ee lagu daweeyo marxaladaha kala duwan ee daaweynta iyo daaweynta kiimikada. Qulqulayaashan qaaska ah waxay bixiyaan iftiin dabiici ah oo dabiici ah iyo isku dhafka midabka quruxda badan waxay si buuxda u muujineysaa saameynta naqshadda dabiiciga ah ee loo yaqaan 'Granite iyo marmar'. Saamaynta muuqaalka ee dabiiciga-dabiiciga ah laguma gaari karo agab kale. Markaa jaranjarada midabku waxay gacan ka geysaneysaa in sare loo qaado tayada alaabadaada si ay ugu tartanto suuqaaga.
Jumlada midabada isku-dhafan ayaa sidoo kale caan ku ah loo yaqaan 'acrylic Flake', jig-jabka saliidaha, 'chiin' chip, chip color. Waa hal nooc oo ah guluubyo iskudhafan oo ka samaysan resin acrylic iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyad gaar ah. Waxay leedahay wax soo saar gaar ah, oo muujinaya saameynta habka gaarka ah iyo dhaqsaha badan ee dhismaha oo aan lagu beddeli karin jajabyada kale.
Lingshou County Xinfa Mineral Co., Ltd, oo la aasaasay bishii Abriil, 2002, wuxuu ku yaal Lujiawa Industrial Park, Lingshou County, Hebei, China. Waxaan nahay soo-saare xirfad-yaqaan ah oo ah budada mica-fin-gan-darada ah, midabyo midab leh, jajabyo isku-dhafan, vermiculite iwm oo leh awood wax-soo-saar sanadle ah oo ka badan 10,000 tan. Shirkaddeena ayaa dabooleysa qiyaastii 30,000㎡, aagga dhismaha wuxuu qaadanayaa in ka badan 10,000㎡ iyo xafiis 1,200㎡ ah. Sanadkii 2003, shirkadeena waxaa lagu qiimeeyay "Shirkad u Kuurgalida Qandaraaska & Ballan-qaadida Balanqaad" oo ay soo saartey Xafiiska Wershadaha iyo Ganacsiga ee Hebei;
(1) Saamaynta Cajaladaha Filimka rinjiga, buufin qafiif ah wuxuu abuuri doonaa qaab asal ahaan isbarbar socda, sidaa darteed si adag uga hortagaya gelitaanka biyaha iyo walxaha kale ee dillaaca, iyo haddii la isticmaalayo budada mica-tayo sare leh (cabirka dhumucdiisuna waa ugu yaraan 50 jeer, preferab ...
(1) Bedelka sifooyinka indhaha ee balaastigga ah ee loo yaqaan 'Plastics Mica chips' waxay ka tarjumi kartaa oo iftiimin kartaa raysyada infalawansada sidoo kale u nuugta iyo gaashaanka UV, iwm. Sidaa darteed, haddii lagu daro mica dhul leh oo tayo sare leh filimada beeraha, way ku adkaan doontaa iftiinka inuu baxo kadib markii ay dhex galeen ...
Aaladda: Qalabka soo socda waa in la helaa kahor dhismaha. Aad ayey u badan yihiin waxaadna ka heli kartaa dukaamada qalabka dhismaha ama bakhaarada qalabka dhismaha. Qoryaha Faraha Firdhiska ...
La soo bandhigay Alaabada
Midabka Flake 4125
Midabka Flake 8013